Wasiirka Amniga Puntlan oo VOA uga warramay Khilaafka Deni iyo Hey'adda PSF
Cabdisamad Maxamed Gallan
Wasiirka Amniga Maamul Goboleedka Puntland, Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa VOA-da uga warramay khilaafka dhinaca amniga ku saleysan ee soo kala dhexgalay madaxtooyada iyo Hey'adda Nabad-sugidda ee loo soo gaabiyo PSF.
Madaxwaynaha Puntland, Siciid Cabdulaahi Deni ayaa 24-kii bishan November wareegto uu soo saaray xilka uga qaaday agaasimiha Hey'adda Ciidamada Amniga Puntland ee loo soo gaabiyo PSF) Genaraal Maxamuud Cismaan Diyaano, sidoo kalena booskaasi u magacaabay sarreeye-guuto Maxamed Aamiin Cabdulahi Xaji Khayr.
General Maxmuud Cismaan ayaase xil-ka-qaadista lagu sameeyay ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga, arrintaas oo dhalisay xiisad dhanka amniga ah, gaar ahaan magaalada Boosaas.
Haddaba, wariyaha VOA-da Faduma Yasin Jamac ayaa arrimahaasi ka wareysatay Wasiirka Amniga Puntland, Cabdisamad Maxamed Gallan. Cabdisamad ayaa ku billlaabaya ujeedada shir jaraa'id oo ay maanta qabteen.
Halkaan ka dhageyso wareysiga wasiirka